WWDC June 4-8 uye Keynote Keynote 4 | IPhone nhau
WWDC June 4-8 uye Keynote neMuvhuro 4th
«Kana tekinoroji ichibatana nehunyanzvi, pfungwa dzinoshamisa dzinozvarwa. "Mwaka uno wezhizha, isu [Apple] takakoka zviuru zvevanhu vane tarenda kubva kutenderera pasirese kuti vabatane nesu nekushandura mazano avo ave echokwadi."
Nechirevo ichi Apple inozivisa iyo WWDC, Apple Worldwide Vagadziri Musangano. Ichaitika muSan Jose, California, kuMcEnery Convention Center (iyo imwecheteyo musangano wegore rapfuura) kubva 4, Muvhuro, kusvika 8, Chishanu, June 2018. Yokutanga Keynote inotarisirwa neMuvhuro, Chikumi 4.
WWDC ichaita zvinopfuura zana zvikamu zvinodzidziswa neApple mainjiniya,, ivo, ivo vabatsiri, vachakwanisa kugamuchira rubatsiro uye kuvabvunza pazvikumbiro zvavo.
Pamwe chete nenhau, Apple inopa yega-yakagadzirwa mufananidzo mune makodhi emakodhi anomira, pamwe nemavara e "WWDC18" uye zvimwe zviratidzo uye mabhatani eApple anoshanda masisitimu.
Akagara achifarira kuyedza kufumura zvakavanzika zvakavanzika zveaya mameseji. Mune ino kesi, isu tinoona maitiro ese ari mu3D, sekunge yaive "yakawedzera chokwadi". Izvo zvinogona kutipa wink yeiyo iOS 12 yakatarisana neyakawedzera chokwadi, kunyange isu tichirangarira kuti Apple yakatosimbisa kuti iOS 12 ichave sisitimu inozo tarisa kugadzirisa matambudziko nekuvandudza mashandiro emidziyo.
Dai ndaifanira kuratidza chimwe chinhu ndiyo iyo kuvapo kwezviratidzo zvakawanda zveMacOS uye kwete iOS. Ndiri kutaura nezve mabhatani edenderedzwa kuvhara, kudzikisira uye chizere skrini, zvakajairika zvekushandisa windows paMac. Panogona kunge paine dzimwe nhau dzinonakidza mune ramangwana macOS 10.14, iyo yandingafarire. Inogona kuuya nekuona kushoma kweMac Pro kuuya.
Semagariro, Mapindiro eWWDC18 achapihwa zvisina kurongeka uye kunyoreswa kweizvi kwakavhurwa kusvika China, Kurume 22, na18: 00 pm (Spanish peninsular time). Rangarira kuti iwe unofanirwa kuve nhengo yeApple Developer Chirongwa kuti uwane iyo registry uye kukumbira tikiti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » WWDC June 4-8 uye Keynote neMuvhuro 4th